Hereford ụdị ehi 🍗: àgwà na nkọwa nke oke ehi na ụmụ ehi, ịzụ anụ ehi, ọdịnaya na foto - Ugbo - 2019
A na-eji anụ a na-azụ anụ eme ihe karịa ihe a zụtara, ọ bụ n'ihi na ọ dị mma ma kpọọ ya uru maka ahụike mmadụ.
Ndị ọrụ ugbo na-ewu ụlọ ọrụ nsị ha na-ahọrọ ime nhọrọ maka ọdịmma nke anụ ọhịa nwere ọkwa dị elu nke mgbanwe na ọnọdụ dị iche iche nke ihu igwe na ezigbo arụpụtaghị ihe.
E nwere ike ikwu na ọ bụ ìgwè a na-enye ehi a.
Ụdị ehi na oke ehi
Akụkọ banyere ìgwè a bụ Hereford
Mgbọrọgwụ nke Hereford ehi si malite UK. Maka oge mbụ nwa nwa nke a mụrụ na 18th na ngalaba nke Bekee nke Herefordshire, site na ndị ọrụ ala nke kpebiri imezi ahụ na arụpụta nke ụmụ ehi.
Ugbua na narị afọ sochirinụ, a kpọbatara ndị nnọchiteanya nke Hereford nke Great Britain na Canada, site na ebe ha si USA.
Ndị America mere nnukwu ọrụ iji weta ụdị a na ọnọdụ ugbu a.
N'ihi ọrụ a, ehi ndị Hereford nwetara ikike dị ike, nnukwu akwara muscle na ike dị ukwuu iji gbanwee ọnọdụ ọnọdụ ihu igwe ọ bụla.
Àgwà ndị a nyere ha aka ịghọ ndị a ma ama n'ụwa nile - site na North na South America ruo Africa na Australia.
A kpọbatara ha n'obodo anyị n'oge oge Soviet Union, tupu agha agha nke 1941-1945.
A na-eji ezi ntachi obi na-ata ehi chụrụ a, na-atachi obi ruo ogologo oge n'enweghị nsogbu ọ bụla.
Ọdịdị nke anụ ụlọ ndị a dị ezigbo mma..
N'ihi ụda ha dị arọ, nnukwu anụ na ahụ ike, a na-ebute ehi ehi dị iche iche na Hereford dị iche iche na nzụlite nke anụ ụlọ ndị ọzọ.
A na-enyocha ha n'ụzọ dị mfe site na njirimara ndị a:
isi - nke buru ibu na ike, agba - acha ọcha; n'olu dị mkpụmkpụ;
mpi - obere, na-acha ọcha, na nsọtụ - ọchịchịrị, na-aga n'ihu na n'akụkụ;
Agba ahụ bụ ọbara ọbara-aja aja, ma imi, egbugbere ọnụ, akpọnwụ, olu, olu, afọ na tassel na ọdụ dị ọcha;
ahụ dị squat na ogologo oge, nkwonkwo akpụkpọ ahụ dị oke;
ụkwụ dị mkpụmkpụ ma bụrụ otu;
udiri na nwanyi - di nwayo.
Taa, azu nke Hereford bụ otu n'ime ihe kachasị n'ụwa. Nke a bụ eziokwu ahụ ọdịnaya ha anaghị achọ mgbalị dị ukwuu na ego efu.
Ha bụ ndụ afọ 15-18, nke na-eto ngwa na ngwa ngwa na nri. Ọzọ nnukwu gbakwunyere - wetara ụmụ ahụ ike.
Ịzụ anụ ụlọ n'ụlọ maka ndị na-amalite ụzọ bụ azụmahịa na-aba uru. Ị nwere ike ịmasị ịma otú ị ga-esi malite ịzụ ehi ndị na-azụ anụ, nakwa ụdị anụ ndị nwere mmiri ara ehi, gụnyere Red Steppe.
A na-eji ehi dị iche iche a na-azụ Eke mara abụba dị iche iche:
eto eto ụmụ anụmanụ toro eto - karịa 130 cm;
obi girth: heifers - 190-195 cm, bullheads - 210-215 cm;
arọ: heifers - 550-700 kg (na UK - aka 850 n'arọ), ehi - 850-1000 n'arọ (aka 1300 n'arọ - na UK).
A na-amụ ehi dị arọ 25-28 n'arọ (heifers) na 28-34 kg (gobies). Ụkpụrụ ọma nke oke ehi na-eme ka ọ dị mfe ịkwa nká, si otú ahụ belata ọnwụ nke ụmụaka na-amụrụ ọhụrụ na nke nta.
Ha na-eto ọsọ ngwa ngwa ma na-arụ ọrụ nke ọma. N'ihe dị otu afọ, nwanyị ahụ ruru kilogram 290, nwoke nke ọ bụla - 340 kg (nke dị mma na abụba 400). N'ime ọnwa isii na-esote, ha na-agbakwunye ihe dịka 100 kg.
Ntị: Herefords bụ anụ anụ, ya mere, ìgwè ehi a na-emepụta ihe karịrị 1100 - 1200 lita nke mmiri ara ehi kwa afọ.
Dị ka usoro, a naghị agha ehi ndị a, mmiri ara ehi nile na-aga na-azụ ụmụ ehi, nke a na-eto na mmiri nke akpanwa.
Hereford ehi anụ nke dị oké ọnụ ahịa na ahịa ndị ahịa n'ihi àgwà ọma dị elu: ọ bụ "marble", dị ụtọ, dị nro, na-edozi ahụ na nnukwu kalori. Ndị nwere eriri nwere ederede dị nro, a na-etinyekwa ntụpọ abụba dị n'ime ha.
A na-eziga ụmụ anụmanụ ndị okenye maka igbu. Pulp arọ, natara site na otu isi nke ehi, ihe dịka 82-84%, mkpụrụ akụkụ ịta ahụhụ - 58-70%.
Foto "Hereford" azu ehi:
Tụlee okwu abụọ a dị oke mkpa dị ka o kwere mee ka ndị na-azụ atụrụ ọhụrụ nwere ike ime ihe niile n'ụzọ ziri ezi.
Ihe ndị a chọrọ maka ịdebe ehi chụrụ Hereford kachasị mma.
Ntị: ime ụlọ nke Herefords bi na ya kwesịrị ịdị na-ehicha ma dị ọcha. Ndị na-azụ anụ a na-adakwasị ọbụna ọnọdụ ihu igwe kachasị njọ, Otú ọ dị, nchịkọta nwere ike ịkpatara ha nsogbu.
Ndị nwe ya ga-elekọta a na-emechi ihe niile dị n'ime barn. Ụmụ anụmanụ kwesịrị ịnweta ohere na mmiri na ihe oriri, ya mere, a ga-etinye ya na mmiri na etiti ọba.
Ọnọdụ dị mkpa - ọnụnọ nke nnukwu ebe ịta nri. Ọ naghị afụ ụfụ iwuru pensụl dị iche iche maka ụmụ nwanyị na ụmụ ehi na ụlọ maka ụmụ ehi tozuru etozu.
Ngwunye ga-abụ iwu nke ụlọ pụrụ iche maka ehi dị ime. Were ha n'ebe ahụ ga-abụ ụbọchị ole na ole tupu a mụọ nwa ehi ahụ, mgbe ha gụchara, ha ga-anọ ebe ahụ ruo izu ọzọ.
Nlekọta nke ehi ehi nke Hereford na-akwụ ụgwọ ndị nwe ya dị nnọọ mma. Nri ha na-eri kwa ụbọchị bụ hay jikọtara ya na ọka bali salted.
Ntị: ehi na umu ehi ga-enweta ihe oriri na-edozi ahụ, ebe ọ bụ na a na-eji ume na ume dị ukwuu na-azụ nwa ahụ site na akpanwa.
Agụma ehi ga-agụnye silage, nri akọrọ na ihe ndị dị mkpa.
Ụmụ ehi amụrụ ọhụrụ na-eri mmiri ara nne, nke ha kwesịrị ịnata na nkeji 1.5 mgbe ha mụsịrị nwa. Mgbe izu 2 gachara, ihe oriri ha nwere ike ịmalite imebi hay., wee jiri nwayọọ nwayọọ na-agụnye ya na ntanetị.
Nwa ehi na-anọdụ na nne ya maka ọkara otu afọ, mgbe ahụ ewepụ ya na oda ma zigara ya na ụlọ ọrụ dị iche iche. Ebumnuche nke oke ehi kwesiri ibu ahihia, nri ndi ozo na ihe di nma. Ọ dị mkpa na ọ dị mkpa ịgbakwunye ya, calcium na ndị na-edozi ya.
Hereford ìgwè ehi nke mara ezigbo ahụ ikeya mere, nsogbu nke ndị nnọchianya ya bụ ihe dị egwu.
Karịsịa, ụmụ ehi nwere ike ịchọta oyi ma ọ bụrụ na enwee oke iru mmiri na ntinye n'ime ụlọ ebe ha na-edebe ya.
Iji zere nke a, ndị nwe ga-elekọta ọnọdụ dị mma n'ọba.
Cows na-azụ nwa Hereford nwere amamihe pụrụ iche abụghị iche. N'akụkụ nke onye na-azụ anụ ụlọ, a chọrọ ka enye ndị Herefords ọnọdụ ndị dị mkpa nke ụlọ na nri kwesịrị ekwesị, tinyere ihe ndị dị mkpa na ụfọdụ oge nke ndụ ha.
Ntị: ọ bụrụ na ọ dị mkpa iji chebe ịdị ọcha nke Herefords na ọdịdị ha dị iche iche, a ghaghị imefe ndị mmadụ n'otu n'ime ụdị ahụ.
Ihe nrịta anụ nke ụdị ehi a bụ ndị isi ma na-ebute ya na ọgbọ nke ọgbọ n'ọdịnihu.
Ndị ọkachamara na-eji àgwà a mgbe ebe a na-agafe Herefords na ndị ibe ha nke ụdị ndị ọzọ.
Akwukwo ehi nke Hereford gosiputara onwe ya na ulo oru ugbo.
Ihe na-enweghị atụ, nkwụsị dị mma na anụ dị elu mere Herefords otu n'ime ụdị anụ ọhịa ndị kachasị mma.
Nhọrọ nke ndị kasị ewu ewu na-adịkarị ogologo ma na-eme ka ọ bụrụ ihe dị iche
Akwukwo apụl dị iche iche nke okpomọkụ na oke mma - Apple Spas
Peculiarities nke na-eto eto amunoi petunia
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Ahịhịa siri ike na ndị na-enweghị atụ bụ ndị si England - "Hereford"